Filtrer les éléments par date : mercredi, 26 juin 2019
mercredi, 26 juin 2019 19:56
Ambatobe-Antananarivo: Moto nitrongy fiara, vazaha iray naratra
Tovolahy vazaha iray nitondra moto no naratra tamin'ny lozam-pifamoivoizina niseho teny Ambatobe Antananarivo androany atoandro. Nitrongy fiara kely teo alohany ilay moto, vokatry ny fandehanana mafy nefa handika irony dongona fampihenana hafainganam-pandeha irony. Naratra ilay mpitondra moto, samy simba na ilay fiara na ilay moto izay tafasitrika tany ambany.
mercredi, 26 juin 2019 19:20
Fifanosehana teo Mahamasina: 15 namoy ny ainy, 2 tsy mahatsiaro tena
15 namoy ny ainy, 2 maratra mafy ao amin'ny efitra fameloman'aina, amam-polony ireo naratra ao amin'ny hopitaly HJRA Ampefiloha.
mercredi, 26 juin 2019 18:26
Mahamasina: Misy ireo naratra vokatry ny fifanosehana
Nifamonjena nentina ao amin'ny hopitaly HJRA ireo naratra vokatry ny fifanosehana teo ampidirana hijery fampisehoana tao amin'ny kianjaben'i Mahamasina taorian'ny matso, fankalazana ny fetim-pirenena.
Nivoha avokoa ny vavahady ary nisy ny fandaminana, fa mety nasesiky ny hamehana hamonjy toerana no nampisy fibosesehana teo ampidirana, misy koa anefa ny avy ao anatiny nivoaka hamonjy fodiana.
mercredi, 26 juin 2019 18:23
Antohomadinika: Noraisim-potsiny ireo mpanendaka
Ravan'ny ny Polisin'Antaniavo Antohomadinika PPA4-Antananarivo, omaly maraina, ireo andian-jatovo mpanendaka teo amin'ny "Arrêt bus" Mahitsy eo Antohomadinika.
Nanararaotra ny fahamaroan'ny olona izy ireo satria maro ireo olona nandeha Taxi-brousse avy any Mahitsy, Distrika Ambohidratrimo, niakatra hiantsena hiatrehana ny fetim-pirenena. Nendahan'ireo ny mpandeha, ka lasan'izy ireo ny sakaosy nisy vola sy akanjo ary kojakoja.
Niantso vonjy ilay tompony. Nifanenjehan'ny Polisy, izay miasa tsy manao fanamiana fa mitsikilo ny tranga toy izao, ireo mpanendaka. Tratra ambodiomby ny telo, ary ny telo hafa efa tafatsoaka lavitra saingy tratra ihany.
Hiakatra Fampanoavana izy ireo rahampitso 27 jona 2019.
mercredi, 26 juin 2019 17:48
Lambokely-Morondava: Ala 10ha nodoran'ny olona
Mandoro ala ireo andian'olona monina ao anaty ala arovana amin'ny alan'ny Kirindy ao Lambokely rehefa tsy avela mamboly tsako sy maka hazo.
Ala 10ha no efa potik'izy ireo farany teo, hazo "palissandre" maro no ripaka, ampahany ireto 50 tratra tao Kirindy teo ampitaomana azy ireto.
Mpiasan'ny tontolo iainana, nanao fisafoana, no nahita azy ireo ka nampandre avy hatrany ny foibem-paritry tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra.
mercredi, 26 juin 2019 15:20
Fetim-pirenena: Nizara fanomezana ny Kaominina ambonivohitra Morondava
Nizara arendrina sy vatomamy ho an'ny ankizy ny Kaominina ambonivohitra Morondava sy orinasa Orange ary fiadidiam-paritra ny mponina amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao, sady volan'ny ankizy rahateo ny volana jona.
Nomena vary ihany koa ireo olona may trano tamin'ny volana mey teo.
mercredi, 26 juin 2019 15:11
Analakely taorian'ny "bal populaire": No comment
mercredi, 26 juin 2019 14:46
Madagasikara: Mankalaza ny fetim-pirenena
Mitsingerina anio 26 jona 2019 ny faha-59 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sady fetin'ny foloalindahy ihany koa.
Vahiny manokana nasain'ny fiadidiana ny Repoblika amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao ny filohan'i Rwanda, Paul Kagame.
Hanamarika ny fankalazana ihany koa ny fandraisan'anjaran'ny Tafika avy atsy Maorisy, Kaomoro ary avy amin'ny FAZSOI atsy La Réunion amin'ny matso hatao etsy Mahamasina anio tolakandro.
Haseho mandritra izany matso izany ihany koa ireo fitaovana vaovao toy ny fiaramanidina, angidimby, fiara, azon'ny foloalindahy.
mercredi, 26 juin 2019 13:57
Ankorondrano-Antananarivo: Nisy nanafika ny toby mpaninjara solika Galana
Norobain'ny jiolahy mitam-basy ny vola tamin'ireo "pompistes" sendra niasa teo amin'ity toby mpaninjara solika an'ny orinasa Galana eo Ankorondrano-Antananarivo ity. Voaroba ihany koa ireo fiara tonga hanampy solika teo amin'ity tobin-dasantsy ity.
Nirifatra nitsoaka tamin'ny scooter ireo jiolahy taorian'ny fandrobana nataon'izy ireo.
Tamin'ny fotoana mbola mampisomebiseby ny olona manao arendrina ny 25 jona 2019, nanodidina ny tamin'ny 7ora sy sasany hariva, no nisehoan'ny fanafihana. Tsy nisy ny aina nafoy na naratra.
mercredi, 26 juin 2019 13:24
Toamasina: Tao anaty orana ny matso
Adin'ny roa no naharetan'ny matso teto amin'ny araben'ny fahaleovantena androany. Taorian'ny matso miaramila dia nandray anjara ihany koa ny mpianatra avy amin'ny sekoly samihafa, orinasa, antoko politika samihafa.
Nanorana ny andro androany maraina teto Toamasina.